María Jesús Romero de Ávila. Ajụjụ ọnụ | Akwụkwọ akụkọ
María Jesús Romero si Ávila de Lara sitere na La SOlana (Ciudad Real) mana anabatala ya na Madrid. Ọ gụsịrị akwụkwọ na Hispanic Philology, ọrụ ya bụ akwụkwọ akụkọ ma ugbu a ọ na-arụ ọrụ dị ka onye na-elekọta redio. Agbụ na egwu ịnwụ bụ akwụkwọ akụkọ ikpeazụ ya. Ana m ekele gị nke ukwuu maka oge na obiọma ịrara nke a Ajụjụ ọnụ.
María Jesús Romero de Ávila - Ajụjụ ọnụ
AKWỤKWỌ NDỊ AKWỤKWỌ ỤLỌ : Aha akwụkwọ ọhụrụ gị bụ Agbụ na egwu ịnwụ. Kedu ihe ị na -agwa anyị gbasara ya ebee ka echiche si malite?
MARÍA JESÚS ROMERO DE ÁVILA: The aha A na-eche ya nke ukwuu n'ihi na achọrọ m otu awụ akpata oyi. Ọ bụ akwụkwọ akụkọ na-agbagharị na ụdị oji, akụkọ ihe mere eme yana nwere mmetụ agụụ mmekọahụ. Achọrọ m ime ka onye na-agụ akwụkwọ bịaruo nso n'okwu gbasara ọnwụ, nke ịdị mfe anyị, mana na oke ọchị na nso nso. Echiche sitere na a nsogbu nke m nwere nke m chere otutu ihe banyere ya ọnwụ. Achọrọ m ijide mmetụta ndị ahụ, yabụ ihe malitere dị ka ọgwụgwọ mechara ghọọ akwụkwọ akụkọ.
MJRA: Ee, akwụkwọ mbụ m gụrụ bụ Heidi, na m gụgharịrị ya ọtụtụ narị ugboro n'ihi na ndị mụrụ m enweghị ike ịzụrụ m ọzọ. Mgbe ahụ, otu enyi m na-agbazinye m ha ruo mgbe m toruru ileba akwụkwọ ọbá akwụkwọ.
MJRA: Enwere m ole na ole: Isabel Allende, nụkwa, Javier Marias, Cervantes (M gụrụ ọzọ Quijote site n'oge ruo n'oge), Mario Benedetti, Mario Vargas Llosa, Benito Perez Ndi Galdo, Dostoevsky, Arthur Conan Dorothy.
MJRA: Ọ ga-amasị m izute ma mepụta agwa nke Sherlock Holmes, site na akwụkwọ akụkọ Sir Arthur Conan Doyle ọ bụla, dịka ọmụmaatụ, Nkịta nke Baskervilles. Àgwà ahụ masịrị m.
MJRA: N'oge dee Ọ na-amasị m ịbụ naanị, n'enweghị onye n'ụlọ. Enweghị egwu. Y lear Ọ na-amasị m ime ya n'oge ọ bụla na oge ọ bụla.
MJRA: Tebụl kichin maka ide ihe Ahụrụ m ya n'anya. Ọ dị n'akụkụ windo, ebe m na-ahụ osisi, mbara igwe, na odida obodo. Iji gụọ, akwa tupu ụra . Ọzọkwa, ọ bụrụ na m agụghị akwụkwọ mbụ, anaghị m ehi ụra.
MJRA: Ọ masịrị m abu na obere doses na ndu.
MJRA: Emechara m akwụkwọ akụkọ mpụ Carme Chaparro, Emela nna gị ihe nwute, nke masịrị m nke ukwuu, mana asụsụ a na-akparị mmadụ mgbe ụfọdụ. Ma ugbu a, m na ya Squid na romana, site Emilio del Río, ebe anyị na-ahụ na ihe niile na-mepụtara site oge gboo, na nke a na ndị Rom. Ọ na-atọ ụtọ nke ukwuu. TO mgbe ụfọdụ, m na-agụ akwụkwọ uri nke Luis Díaz Cacho, Na-ebi ndụ kwa ụbọchị.
MJRA: Ọfọn, panorama a ga-ebipụta bụ mgbe nile. Ọ dabara nke ọma enwere mbipụta desktọpụ. Enwere ọtụtụ ndị mbipụta nke ụdị a na-eme ya nke ọma na ọnụ ahịa dị ọnụ ala. Y Ekpebiri m ibipụta n'ihi na ọ bụ nsogbu na-echere, nrọ ịghọta. Enwere m ike ịme ya na Amazon n'efu, mana achọrọ m mbipụta dị ọcha yana Ediciones Doce Calles enwetara m ya.
MJRA: Ọ na-esiri m ike nke ukwuu karịsịa oge a tụrụ mkpọrọ, inwe ezinụlọ na-abụghị Madrid. Abụrụla sie ike. Ana m edobe ya akụkụ dị mma nke ịdị n'otud, nke ike na mgba nke mmadụ nwere, anyị nwere ike na ihe niile. O mewokwa ka m jiri ihe ndị a na-eme kwa ụbọchị kpọrọ ihe karị, ahụ́ ike, ọbụbụenyi, ezinụlọ.
Echeghị m na m na-eji ọrịa na-efe efe n'onwe ya dị ka isiokwu iji dee, mana nsogbu akụ na ụba na ọrụ nke anyị na-enwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » María Jesús Romero si Ávila Lara. Ajụjụ ọnụ
Olavo Bilac. Ememe ncheta ọmụmụ ya. Egwu